သစ်သားလေဆာစက်များ, Tube လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက် - ဟန်ရဲ့ Yueming
အရောင်း (+86) 188 2695 0666 အီးမေးလ်: ymqqs@ymlaser.com
ဟန်ရဲ့လေဆာ Group မှအဖွဲ့ဝင်
လေဆာအက္ခရာ တင်. စက်
R & D နိုင်ခြင်း
ထုပ်ပိုး & ပုံနှိပ်
Advertising ကြော်ငြာ & လက်ဆောင်များ
ဖိနပ် & အိတ်
အီလက်ထရောနစ် & Applications
သတ္တု & ပလတ်စတစ်
အထည်အလိပ် & အထည်ချုပ်
စက်ဖြတ်တောက်ခြင်းခရမ်းလွန် / အစိမ်းရောင်လေဆာ
အဓိကအားဖြင့်သစ်သား, စက္ကူ, သားရေ, acrylic, ပလပ်စတစ်, ရော်ဘာ, ဝါးနှင့်အခြား Non-သတ္တုပစ္စည်းများအဘို့ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
high-ပါဝါ Fiber လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
mid-ပါဝါ Fiber လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
သတ္တုပစ္စည်းများစသည်တို့ကိုသံမဏိ, ကာဗွန်သံမဏိ, လူမီနီယံအလွိုင်း, တိုက်တေနီယမ်အလွိုင်းကြေးဝါ, အနီကြေးနီအဖြစ် scuh
မြင့်မားတဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်သင့်လျော်သောအမြန်နှုန်း, ကောင်းသော marking ရလဒ်, efficieny, marking တည်ငြိမ်လေဆာပါဝါ, ။
ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များကတ်များ, လက်ဆောင်, နှုတ်ဆက်ခြင်းကတ်များအဖြစ်သီးခြားဒဏ်ငွေအပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်အဓိကအားဖြင့်သင့်လျော်သော
သံမဏိ, ကာဗွန်သံမဏိ, သွပ်ရည်စိမ်စာရွက်, ကြေးဝါ, လူမီနီယံအလွိုင်းပန်းကန်နှင့်အခြားသတ္တုများ: ပစ္စည်းများမှသက်ဆိုင်သော
GD Han'S YUEMING laser GROUP CO ။ , LTD မှ,
ရှန်ကျန်းဟန်ရဲ့လေဆာနည်းပညာ Co. , Ltd မှ၏လက်အောက်ခံ
(စတော့ရှယ်ယာကုဒ်: 002008), လေဆာစက်ထုတ်လုပ်နှင့်သုတေသန & ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီပေါင်းစက်မှုဇုန်လေဆာထုတ်ကုန်များရောင်းချခြင်းအပေါ်အလေးပေးသော Hi-tech လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိပ်တန်း 500 Hi-tech လုပ်ငန်းတွေကဝိုင်း Songshan ရေကန် Hi-tech စက်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးဇုန်အတွက်တည်ရှိပြီးဟန်ရဲ့ Yueming လေဆာအိုင်တီနှင့်ကွမ်ကျိုး, ရှန်ကျန်းအတွက်မင်္ဂလာပါ-နည်းပညာလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်, ဟောင်ကောင်ဟာကွဲပြားခြားနားနေဖြင့်တဖြည်းဖြည်းနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်ဖွံ့ဖြိုးအဖြစ်ထားပြီး ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက် Dongguan ရဲ့တိုး,
Daliang Shunde စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီသွားရောက်ကြည့်ရှုဆီသို့ရောက် လာ. ,
ကျနော်တို့ကသူတို့ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၏အခမဲ့စမ်းသပ်အတူဖောက်သည်ပေးနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်နီယာဖြတ်တောက် engraving သို့မဟုတ် marking ရဲ့အကောင်းဆုံးရလဒ်စမ်းသပ်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါစမ်းသပ် parameters တွေကို, အသေးစိတျဓာတျပုံ, စမ်းသပ်ခြင်းအစီရင်ခံစာနှင့်ဗီဒီယိုဖောက်သည်ရဲ့ရည်ညွှန်းသည်လူကိုစေလွှတ်နိုင်ပါတယ်။
123 ကွိမျမွော Canton တရားမျှတသောအဆင့် | ကွမ်ကျိုး 2018
Daliang Shunde စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်တွေ, သွားရောက်လည်ပတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Dongguan ဌာနချုပ်၌ငါတို့နှင့်အတူလဲလှယ်သို့ရောက်ကြ၏။ ဟန်ရဲ့ Yueming လေဆာ Group မှ Zhuofei ၏လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာနွေးနွေးထွေးထွေးသည့်ဧည့်သည်များကိုလက်ခံရရှိခြင်းနှင့် In-depth စကားပြောဆိုမှုရှိခဲ့သည်။
LED နိမိတ်လက္ခဏာကိုလေဆာရောင်ခြည်ဖြတ်တောက်ခြင်းစက် --- နာမည်ကြီးဆိုင်တစ်ဆိုင်၏လျှို့ဝှက်ချက်
အဘယ်ကြောင့်ဟန်ရဲ့ Yueming လေဆာ Group မှ Choose
ခိုင်မာတဲ့ R & D တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိ
156 မူပိုင်ခွင့် 80 အဓိကထုတ်ကုန်ပြွတ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်နည်းပညာကိုထပ်တူကျအောင်
တင်းကျပ်သော QUALITY Management System
QUICK SERVICE ကို
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် 200 ဝန်ဆောင်မှုထွက်ပေါက်ပေါင်း 100 ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုယာဉ်များ 24 နာရီဂရုစိုက်တတ်တဲ့ဝန်ဆောင်မှု
အမှတ် 28 အရှေ့စက်မှုဇုန်လမ်း, Songshan ရေကန် High-Tech မှစက်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးဇုန်, Dongguan, ဂွမ်ဒေါင်း, တရုတ်။
Automatic Laser Welding Machine, စက်မှတ်သားနေပါသည် CO2 လေဆာ , Co2 Laser Cutting Machine Price, 100w CO2 လေဆာအက္ခရာ တင်. ဖြတ်တောက်ခြင်းစက် , Laser Cutting Machine ., စက်မှတ်သားနေပါသည် 50w လေဆာ ,